वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : October 2008
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ October 28, 2008
यो ब्लगमा पाल्नुहुने समस्त महानुभावहरुमा शुभ दीपावलीको मंगलमय शुभकामना!!! यहाँको जीवनमा सधैं सुख, सफलता र समृद्धिको उज्यालो छाइरहोस्!
चाडबाड आयो, घर-गाऊँको याद झन्-झन् गाढा भएर आऊँछ र रुनै मन लाग्छ। अघि भर्खर किशोर भतिजाहरुको मेल पढ्दै थिएँ। उनीहरुको देउसी-भैलोको तयारीको बारेमा लेखेका छन्। उनीहरुको मेलले झन् भँड्क्यायो मलाई र केहि पनि गर्न मन लागिरहेको छैन। आफ्नो बाल्यकालका देउसी-भैलोको रमाईलो र घमाईलो दिनको भाइटिका आँखै अगाडि झल्झली आएको छ।
बच्चामा हामी दशैं रमाईलो कि तिहार रमाईलो भनेर एकापसमा कुरा गर्थ्यौं। दशैं सकिएर तिहारको प्रतीक्षा हुन थालेपछि यो कुरा हुन्थ्यो। बितिसकेको दशैंभन्दा तिहारको कल्पनाले जित्थ्यो र हामी सबै तिहारलाई बढी रमाईलो भन्थ्यौं। मलाई अहिले पनि तिहारै रमाईलो लाग्छ। एउटा उमेरसम्म देउसी-भैलो पनि खेलियो। भैलो केटीहरुका लागि हो भन्ने गरिएको थियो हामीलाई, त्यसैले हाम्रो जोड देउसीतिरै हुन्थ्यो, अलि‍-अलि भैलो पनि नखेलिएको भने हैन। देउसी खेल्ने दिनको लागि लालटीन खोज्ने र मट्टीतेल किन्नको लागि एकापसमा पैसा उठाउने काम एक-डेढ हप्ता पहिलेबाटै शुरु हुन्थ्यो। हुनत पछि एक-दुई ठूला र 'आयोजित' देउसी-भैलो कार्यक्रममा पनि हिँडियो, तर बाल्यकालको हाम्रो 'रफ' देउसी-भैलोनै गडेको छ दिमागमा। भाइटिकाको दिन सबैभन्दा प्यारो दिन, यो दिनको बयान गर्ने सामर्थ्य छैन ममा। मेरो स्मृतिमा रहेका हरेक वर्षका भाइटिकाका दिनहरु घमाईला र सुन्दर छन्। (हुनपनि, वर्षभरिमा सबैभन्दा राम्रो मौसम तिहारकै बेलामा हुन्छ। दशैंमा वर्षायामको अंश अझै बाँकी हुन्छ।) तर यो वर्षपनि बहिनीहरुलाई फोन गर्नु र टिका लगाउन लहरै बसिरहेका दाइ-भाइहरु र उनीहरुका निधारमा टिका लगाईदिईरहेका बहिनीहरुलाई मनको आँखाले सम्झिनुबाहेक केहि गर्न सकिने छैन। घमाईलो आँगनमा बसेर गफिन पाईने छैन। बारीका डिल-डिलमा फुलेका सयपत्री र मखमली यो पाली पनि मेरो भागमा पर्नेछैनन्-----!
केहि दिन यतादेखिका, भुटानी-नेपाली शरणार्थी नेपालीहरुसंग सम्बन्धित समाचारहरुमा गएर मेरो ध्यान अड्किरहेको छ। दशैंताका होला, तेस्रो देशमा पुनर्वासका लागि जान लागेका नेपालीहरुको तस्बीर देखेको थिएँ (कान्तिपुरमै होला)। केहि दिन पहिला भुटानी सरकारका एक अधिकारीका भनाईहरु पढेको थिएँ। नेपालमा रहेका भुटानी-नेपाली शरणार्थीहरुको तेश्रो देशमा भईरहेको पुनर्वासले उनलाई र भुटानी सरकारलाई निकै 'खुशी' बनाएको रहेछ। यो समस्या यसरी 'सुल्झिएपछि' नेपाल-भुटान सम्बन्धमा कुनै पनि समस्या नरहने उनको दावी थियो। अझ यस्ता 'सानातिना' कुरालाई उनले समस्यानै ठानेका रहेनछन्। (कहाँ पढेको भन्ने याद भएन, माफी चाहन्छु। अबदेखि यस्ता कुराहरुको लिंक संकलन गर्ने बानी बसाउनेछु।) आफनो जीऊको काँडो झिकेजस्तो भईरहेको होला भुटानी सरकारलाई। एक-दुई दिन पहिलानै हो, भुटानी सरकारका जासूस/दलालहरु आएर झापाका शरणार्थी क्याम्पहरुबाट राजनीतिक रुपमा सकृय ब्यक्तिहरुलाई अपहरण गरेर भुटान पु-याउने काम नियमितजस्तै हुन्छ भनेर पनि पढेको थिएँ। मध्ययुगीन भुटानका जेलमा पुगेपछि ती ब्यक्तिहरुको के हालत होला, हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं।आजको कान्तिपुर अनलाईनमा फेरि अर्को खाले खबर छ, यहाँ पढ्नुहोस् Not all Bhutanese can get resettled कथित 'तेश्रो देशमा पुनर्वास'को तेश्रो देशको लाल-बुझक्कडपनले पारिवारिक विखन्डन ल्याएको उदाहरण हो यो। भुटानी-नेपालीहरुको यो बिजोगको बारेमा यहाँ मैले केहि लेखिरहनुपर्दैन। एक लाखभन्दा धेरै मानिसहरुलाई जातीय दमन गर्दै अमानवीय ढंगले लखेटिएको थियो। भुटानी-नेपालीहरुको एउटा पुस्ता शरणार्थी शिविरमै जन्मेर युवा भईसक्यो। दुई दशक बितिसक्दा पनि भुटानी-नेपालीहरुको यो समस्याले किन अरु शरणार्थी समस्याजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाउन सकेन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु किन तीनलाई भुटानतिरै सम्मानजनक रुपमा फिर्ता पठाउनेतिर लागेनन् र कथित 'तेश्रो देश'को विकल्पमा लागे, यो बुझिनसक्नु छ।भुटानतिरै जान संघर्ष गरेर बसिरहने या विकसित देशको भौतिक सुख रोज्ने भन्ने कुरा भुटानी-नेपालीहरुको आफ्नो चासोको विषय हो। यसमा म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्न। आफ्नै देशमा सम्मानजनक रुपमा बस्न पाएका र कतिपय आर्थिक रुपले सम्पन्न मानिसहरु त पश्चिम र अमेरिका भनेपछि हुरुक्कै ज्यान फालेर उडिरहेको बेलामा घरको न घाटको ताल भएका भुटानी शरणार्थीहरुमध्ये धेरैले अलिक स्थायित्वयुक्त जीबन र सन्ततिहरुको सुरक्षित भविष्यको आशा गर्दै पश्चिम जाने बाटो रोज्नु अत्यन्त स्वाभाविक छ। तर मेरो मनमा खेलिरहेको प्रश्न भने के यो नै सही र एकमात्र उपाय थियो त? अनि मलाई के लाग्छ भने यो निर्णय, यो प्रकृयाले दुनियाँको बिभिन्न ठाऊँमा बसिरहेका नेपाली मूलका नागरिकलाई दूरगामी असर पार्नेछ र नेपाल आफैं पनि लामो समयसम्म प्रभावित भईरहनेछ। भुटानी शरणार्थी समस्याको सही निकास भनेको शरणार्थीहरुको सम्मानजनक भुटान-फिर्तीनै हो। त्यो निकास ननिक्लनु हाम्रो कूटनीतिको चरम असफलता हो। हाम्रा सरकार, दलहरु र नेताहरु शरणार्थी वर्गीकरण जस्ता भुटानी कूटनीतिक जालमा सजिलै बल्झिए र लामो समयसम्म त्यसैमा अल्मलिईरहे। अर्कोतिर, भुटानी-नेपाली शरणार्थी समस्यालाई नेपाल र भुटानको द्विपक्षीय मु्द्दाबाट भारतसहितको त्रिपक्षीय मुद्दा बनाउन नेपाल पूरै असफल भयो। यो समस्याको मूल कारण भुटानमात्रै होईन, भारत पनि हो। भुटानी-नेपालीहरु लखेट्ने काम भुटानी सरकारले भारतकै संरक्षणमा गरेको हो भन्ने कुरा सबैलाई स्पष्ट छ। एक त भारतले चाहेको भए भुटानका नेपालीलाई लखेटिनबाट रोक्ननै हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो। आफूलाई 'संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र' भन्ने एउटा प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्तिको धर्म हुन आउँछ त्यो। भारतले यो आफ्नो दायित्व त पूरा गरेन-गरेन, ती शरणार्थीलाई आफ्नो भूमिमा बस्न समेत दिएन र सीमा कटाएर नेपालतिर फ्याँकिदियो। यो मुद्दामा भारतले खेलेको अत्यन्त नकारात्मक भूमिकाको अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा र यहाँसम्म कि भारतकै नागरिक समाजमा समेत खासै चर्चा भएको छैन। हामीले अलिक बढी चर्चा उब्जाउन सकेको भए स्थिति फरक हुनेथियो शायद।भारतलाई नेपाली राजनितिको सबैभन्दा बलियो 'किङमेकर' को रुपमा पूरै नेपाल र विशेष गरी राजनितिक दलहरुले सामान्य रुपले स्विकार गरिरहेका छन् र निकट भविष्यमै यो स्थितिमा परीवर्तन आउने छाँट छैन। सरकार पछि सरकार झन् जन् भारतपरस्त बन्दै गईरहेका छन्। यसैले हाम्रो कूटनीतिक प्रयास अलि सशक्त होला भनेर आश गर्ने ठाऊँ पनि छैन, उल्टो हाम्रा राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरु अब ढुक्कले यो मुद्दाबाट हात धोएर बस्न बेर छैन।अब त झन तेश्रो देशतिरको पुनर्वासले भुटान-फिर्तीको सवाललाई कमजोर बनाईदिएको छ। यो धारणाले भुटानी-नेपाली शरणार्थीहरुमा फुटनै पैदा गरिसकेको छ र समयक्रममा भुटानी-नेपाली शरणार्थीहरुको स्वदेश-फिर्तीको आन्दोलन पूरै सेलाएर जाने लक्षण देखिएको छ।तेश्रो देशमा पुनर्वासको यो प्रकृयापछि पनि भुटानमै बाँकी रहेका अरु नेपाली मूलका जनताप्रति भुटानी राज्ययन्त्रको भविष्यको ब्यबहार कस्तो हुनेछ भनेर कसैले पनि सोचेका छैनन्। हामीले भुटान विरुद्ध खासै कुनै दबाब सृजना गर्न नसकेकोले भुटान हौसिएको हुनुपर्छ र बाँकी रहेका नेपालीलाई पनि कुनै दिन कुनै बहानामा लखेट्ने उसको योजना हुनसक्छ। भारतको नियत पनि उस्तै छँदैछ। अर्कोतिर यस्तै घटना भारतका बिभिन्न राज्य र बर्मामा रहेका नेपालीहरुका हकमा पनि दोहरियो भने के गर्ने? आसाम र मेघालयका 'आदिवासी' हरुले धेरैचोटि नेपाली मूलका मानिसलाई लखेटिसकेका छन् र अझै पनि बेलाबेलामा धम्की दिईरहेका छन्। के त्यतिखेर पनि पश्चिमीहरुलाई गुहार्ने लगिदेऊ भनेर? नेपालभित्र रहेका सबै नेपालीहरुको गाँस-बास-कपास-सुरक्षा आदिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो। तर नेपाल सरकारको जिम्मेवारी यत्तिमै सीमित भने होईन। संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरुको हक-अधिकारको सुरक्षाको लागि कूटनीतिक पहल गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा तिनका लागि सशक्त आवाज सृजना गर्नु पनि नेपाल राज्यको जिम्मेवारी हो। हो, भौगोलिक नेपाल मेची-महाकालीमा सीमित छ तर सांस्कृतिक नेपाल धेरै फैलिईसकेको छ। त्यो सांस्कृतिक नेपालको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि नेपालकै हो। भुटानी-नेपाली शरणार्थीहरुको मामलामा हामी नेपाली आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन गम्भिर रुपमा असफल भएका छौं।******************Is the tide turning----Shame on India! Shame on Bhutan!
वर्कशप पछिका दिनहरुमा बेस्सरी बेफूर्सदी भईयो, अस्तिको टाँसो पनि त्यस्तै ‘हतारको काम लतार’ भनेजस्तो भयो। थप केहि टुक्रा-टाक्री कुराहरु आज लेख्दैछु।----------------कार्यक्रम गरिएको जाइकाको हल नेवा: ईण्टरनेशनलको नाममा लिईएको थियो। NEA-JC जापानमा दर्ता नभएको हुनाले यसको नाममा हल लिन नमिलेको रहेछ। उक्त सहयोगका लागि नेवा: ईण्टरनेशनललाई फेरि एक पटक धन्यबाद!---------------कार्यक्रममा 'मास' कम हुने कुरा अलिक पहिलेबाटै उठेको हो। कार्यक्रमको अघिल्लो दिन र कार्यक्रमकै दिन पनि फेरि उठ्यो। 'ईञ्जिनियरकै लागि मात्र' भनेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको निश्चय पनि होइन। कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक बनाउन नेसाज र एनआरएनमा पनि जानकारी पठाइएको थियो र ईञ्जिनियर बाहेकका साथीहरुसंग पनि पेपरका लागि अनूरोध गरिएको थियो। हाम्रो तर्फबाट केहि कमजोरीहरु पक्कै पनि रहे होलान् यस मामिलामा, तर अचेल जापानमा हुने नेपाली कार्यक्रमहरुमा 'मास' जम्मा हुने कारण अलि फरक छ। ती कार्यक्रमहरु कि राजनीतिक हुन्छन् कि जातीय संस्थाका हुन्छन्। तीनमा स्वभावत: 'मास' ठूलो हुननै भयो। त्यस्ता कार्यक्रमहरु 'गज्जब' हुन्छन्, हरेक कार्यक्रममा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजदूतावास र बिभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई 'आसन ग्रहण' गराईन्छ। यो आसन ग्रहण गराईले उस्तै परे आधा घण्टा खाईदिन्छ। अनि सबैलाई 'छोटो मन्तब्य' दिन पनि आग्रह गरिन्छ, जुन 'छोटो मन्तब्य' औसतमा पनि ४०-५० मिनेटको हुन्छ। कार्यक्रमको मूल विषयलाई अत्यन्त कम समयमात्र बाँकी रहन्छ, उस्तै परे मूल विषयमा प्रवेशै नगरी कार्यक्रम सकिन्छ। यस्तो कार्यक्रम गर्ने समय NEA-JC संग छैन।आफ्नो तर्फबाट प्रचारमा भएका कमी-कमजोरीलाई भने NEA-JC ले अबका कार्यक्रमहरुमा सच्याउनेनै छ।----------------वर्कशपमा राजदूतावासको प्रतिनिधिको रुपमा डेपुटी चिफ अफ द मिसन डा. दुर्गा बहादुर सुबेदी क्षेत्रीजी (जसको साहित्यिक नाम दुबसु क्षेत्री हो)को उपस्थिति थियो भने एनआरएनको तर्फबाट एनआरएन-जापानका केन्द्रीय सदस्य सफला धितालजीको उपस्थिति थियो। ----------------दुर्गा बहादुर सुबेदी क्षेत्रीजीको चार-पाँच पृष्ठ लामो लिखित बक्तब्य अंग्रेजीमा थियो। बक्तब्यमा 'नयाँ नेपाल' यथेष्ट दोहोरिएको थियो।----------------पूरै कार्यक्रम 'नेपाङ्रेजी' भाषामा चलेको थियो। नेपालीहरुमात्रै भेला भएको कार्यक्रम पूरै अंग्रेजीमा गर्नुमा कुनै तुक छँदा पनि छैन तर नेपाली भाषाको प्राविधिक शब्दाभाव (र भएका पनि प्रयोग नगरिने चलन)ले गर्दा प्राविधिक शब्दावली भने अंग्रेजीकै हुनु स्वाभाविकै भयो।--------------- दिउँसो खाना खाँदा सूर्य दाइको एउटा खेलले रमाईलो गरायो एकछिन। सय येनको सिक्कालाई बढाबढमा किन्ने खेल थियो। शर्त चाहिँ, १) सबैभन्दा बढी कबोल्ने दुई जना (टप टू)ले पैसा सूर्य दाइलाई दिनुपर्ने र २)त्यो सिक्का सबैभन्दा बढी कबोल्नेले पाउने। सयको सिक्कामाथि असीजतिको बोली परिसकेको थियो र खेल चालू रहे सय सजिलै नाघ्ने लक्षण देखिएको थियो, सूर्य दाइले खेल रोक्दासम्म। सूक्ष्म अहं र जूवाडे मनस्थिति जन्मिदो रहेछ बोली लगाउन थालेपछि। नेपालको राजनीतिलाई यो खेलले राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्ने धारणा थियो सूर्य दाइको।दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ यो खेललाई। पहिलो हेराईमा नेता र दललाई सय येनको सिक्काको रुपमा हेर्ने हो भने हामी जनताहरु सय येनको सिक्कालाई हजार येन तिरेर किनिरहेका छौं।दोश्रो हेराईमा, हामी जनता आफैं सय येनको सिक्का हौं। र नेता र दलहरुको सिण्डिकेट यस्तो छ कि धेरै कम मोलमा हामी 'बेचिईरहेका' छौं। बढाबढमा बोली लगाउनेहरुको सिण्डिकेट हुने हो भने १० येनमै बोलीलाई सीमित गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा माथिका दुई जनामध्ये एउटाले १० र अर्कोले ९ येन बोलेर १९ येन तिरेको भरमा सय येनको सिक्का हात पार्न सक्छन्।-------------------- खाना खाएर हलतिर फर्कँदै गर्दा एउटा भित्री बाटोमा रातो ट्राफिक लाइटमा परियो। बटन थिचेर हरियो बल्ने प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं हामी, तर धेरै बेरसम्म बल्दै-बलेन। रातैमा भएपनि बाटो काट्ने सूर गर्दै थियौं हामी (त्यति चल्तीको बाटो थिएन त्यो), एउटी कुइरीले हामीभन्दा पहिल्यै दौडिँदै बाटो काटी। "जापानीले यो कुइरीलाई हेरेर चाहिँ 'इसोगासीइ ने!' (कति हतार छ विचरीलाई!) भन्छन्, हामीलाई भने आँखा तर्दै 'वारुइ गाइजीन' (खराब बिदेशीहरु!) भन्छन्।" एकजना साथीले हाँसो गर्नुभयो। कुरोमा हाँसो भएपनि भित्री यथार्थ भने त्यस्तै हो।
नेपाल ईञ्जिनियर्स एशोसिएसन-जापान केन्द्र (Nepal Engineers' Association-Japan Center, NEA-JC in short) को आयोजनामा गएको आइतबार (अक्टोबर १२) टोकियोमा एक वर्कशप सम्पन्न भयो। "2nd NEA-JC Workshop on Present and Future Technology" भन्ने थिममा आयोजित यो वर्कशपमा जापानमा कार्यरत/अध्ययनरत नेपाली ईञ्जिनियरहरुले आफ्ना कार्यपत्रहरु पेश गरेका थिए। नेपाल ईञ्जिनियर्स एशोसिएसन-जापान केन्द्रको एउटा प्रमुख गतिबिधिको रुपमा गत वर्षबाट यो कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो। गत वर्ष यो कार्यक्रम हामीले ओसाकाको दाइतो शहरमा आयोजना गरेका थियौं, यहाँ क्लिक गरेर हेर्नसक्नुहुन्छ त्यस बारेमा। नेपाल ईञ्जिनियर्स एशोसिएसन सबै विधाका ईञ्जिनियरहरुको साझा संस्था भएकोले यो कार्यक्रममा स्वभावत: धेरै विषयका पेपरहरु प्रस्तुत भए। फरक क्षेत्रका कुराहरुका बारेमा साथीहरुबाट सुन्न पाउँदा अलिकति सामान्य ज्ञान बढ्ने त छँदैछ, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहिँ ईञ्जिनियरिङ पेशा द्रूत गतिमा cross-disciplinary हुँदै गएको यो जमानामा यसले पेशागत जीबनमै पनि सकारात्मक असर दिने पक्का छ।यो सन्दर्भमा पोहरको कार्यक्रममा एकजना साथीले भनेको याद आउँछ; "आफनो क्षेत्रबाहेकका विषयमा पनि अलि-अलि गफ दिन जान्ने भइयो। यो 'गफ दिन जान्नु' वा 'गफ दिन सक्नु' पनि ठूलो कुरो हो।"उक्त वर्कशपका बारेमा थप NEA-JC को गृहपृष्ठमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तल केहि फोटोहरु राखेको छु। कार्यक्रमको सिलसिलामा टोकियो पुग्ने क्रममा ११ तारीख बेलुकी म साइतामा मिसातोमा पुगेको थिएँ अखिलेश दाइ र वेदजीको निम्तोमा। वेदजीसंग पोहर ओसाकामा भेट भएको थियो। अखिलेश दाइसंग भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष भेट भएको थिएन। त्यो साँझ, मिसातो दान्ची (आवास क्षेत्रमा) रहेका नेपालीहरुको रमाइलो दशैं कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका मिल्यो। यो मौका दिनुभएकोमा वेदजी, अखिलेश दाइ र मिसातोका सबै नेपाली साथीहरु र भाउज्यूहरुलाई हार्दिक धन्यबाद! अहिलेसम्म फोनमा मात्रै कुराकानी भएका ब्लगर मित्र सुरेश परीवर्तनजी र अरु धेरै साथीहरुसंग पनि चिनजान भयो।कार्यक्रम सकिएपछिको साँझ नेपाली रेष्टूरेण्ट तिहारमा भएको सानो जमघट पनि निकै रमाईलो भयो। उक्त जमघटमा मझेरीका कुमारजी, अखिलेश दाइ, अमनजी, विदुरजी, लताजी, रिपेन्द्रजी र म थियौं। त्यहाँ पक्का नेवारी स्वादका खानेकुराहरु धेरै थिए। नेपाली राष्टूरेण्ट भनेपछि यस्तो पो हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ। अरु धेरै रेष्टूरेण्टले नेपाली खानाको नाममा नान-करी मात्रै बेचेर बसेका छन्।१२ तारीखको रात कुमारजीको कोठामा बसियो।तल कार्यक्रमका केहि फोटोहरु; Presented Papers:1) Special presentation: Technology transfer for infrastructure development in Nepal -- Er. Surya Raj Acharya2) History, current status and future development of the Internet -- Er. Ved Pd. Kafle3) Information sharing on the social semantic web -- Er. Aman Shakya 4) Experimental investigation of damping for stone masonry -- Er. Hari Parajulee5) Greater need of pre-disaster management for infrastructure development and resource generation in Nepal -- Er. Netra Prakash Bhandari6) Three dimensional transient slope stability analysis of landslide dam failure -- Er. Ripendra Awal7) Numerical solution of the Navier-Stokes equations for incompressible free surface flow in porous media under forced drainage conditions -- Er. Bidur Ghimire8) नेपालको विद्युत विकास : अहिलेको वास्तविकता र अबको बाटो -- Er. Netra Gyawali9) Role of Nepalese engineers abroad in infrastructure development of Nepal -- Er. Dinesh Manandhar10) About living space of Buddhist monastery in Patan-a research on living environment management for elderly of traditional city -- Er. Lata Shakya11) Modeling lung deformation during breathing -- Er. Subas Chhatkuli Panel DiscussionTopic: Saptakoshi flooding - Could it be prevented?Chair : Er. Surya Raj AcharyaPanelists: Er. Netra Prakash Bhandari, Er. Dinesh Manandhar, Er. Basanta K Gautam
यो ब्लगमा पाल्नुहुने समस्त महानुभावहरुमा विजयादशमी-२०६५को हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!! यो पवित्र दिनले यहाँको जीवनमा अझ धेरै खुशी, अझ धेरै सफलता र अझ धेरै सम्पन्नता ल्याओस्।**मेरो मनको दशैं**
देश बाहिर बसिएको छ मन उदास हुनेनै भयो, त्यो पनि यो दशैंको बेलामा। अचेल सधैंभरि मलाई आफू शाकाहारी हुन नसकेको पछुतोले पनि टोकिरहन्छ। नेपालमा दशैं पशुपंक्षी-हत्याको पर्याय बनेकोले दशैंको यो बेलामा झन बढी टोक्छ मलाई मेरो पछुतोले। हो मलाई थाहा छ, मासु खान नछोडुञ्जेल जनावरमाथि हुने हिंसाको मैले विरोध गर्नुमा कुनै दम छैन। आज कान्तिपुर अनलाईन हेरेपछि झन नरमाइलो लागेको छ। काठमाण्डौंकी नयाँ कुमारीको रुपमा चुनिएकी बालिकालाई उनका अभिभावकले बोकेर कुमारीघरतिर लाँदै गरेको तस्वीर छ त्यहाँ। यो तस्वीरले मलाई पर्सिएर गिँड्न तयार गरिएका खसी-बोकाको याद आयो अचानक। कथित संस्कृति र परम्पराको जसले जतिसुकै दुहाई दिउन्, ती निर्दोष वालिकाको सुन्दर बाल्यकाललाई बलि दिइएको नै हो यो।विगतमा परम्पराको नाममा मरेको लोग्नेसंगै जिउँदै जलाईन्थ्यो नारीलाई। त्यस्ता परम्परालाई जोगाउन पनि विगतका 'सांस्कृतिक ठेकेदार'हरु यसरीनै संस्कृति र परम्पराको दुहाइ दिन्थे होलान्, तर ती जोगिन सकेनन् किनभने तिनले मानव अधिकारको चरम हनन् गरेका थिए, ती क्रूर सामन्ती समाजका उपज थिए। हाम्रो उपत्यकाको कुमारी प्रथा पनि सामन्ती समाजको अवशेषमात्रै हो। विगतका केहि सामन्ती शाशकहरुको लहडका कारण युगौं-युगदेखिका बालिकाहरुलाई दास बनाएर राखिएको छ, देवी बनाउने निहुँमा। कथित अभिभावकहरुको कुनैपनि निर्णयको विरोध गर्न नसक्ने यस्ता कलिला बालिकाहरुको बाल्यकाल खोस्ने कस्तो 'महान' संस्कृति बनाएको र मनाएको हो हाम्रो समाजले?! यो प्रथा सामन्ती राजतन्त्रसंग जोडिएर आएको प्रथा हो। देशबाट राजतन्त्र गयो तर यस्ता कुप्रथामाथि अझै सशक्त आवाज उठेको छैन। हात्तीहरु एक-एक गरी 'छिर्दैछन्' तर पूच्छरहरुले अझै हामीलाई विगतमै 'अड्काइरहेका' छन्। के प्रमाणित हुँदैछ भने राजनीतिक मौसम जति फेरिएपनि साँस्कृतिक रुपमा हामी अझै ४०० वर्ष पहिलेकै निद्रामा छौं।गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले, पहिलो सरकारले यसबारेमा अलिक आँट लिन सक्नुपर्थ्यो। कमसेकम वहसमा यसको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्थ्यो र राज्यलाई यो निर्दयी प्रथाबाट अलग बनाउन सक्नुपर्थ्यो। अनि, संविधानमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ तर हिजो राजाले गर्ने सबै काम राष्ट्रपतिले गरेका छन्। देश कसरी धर्मनिरपेक्ष भयो?!हेर्नुस् बलि चढाईँदै गरेको एउटा निर्दोष सुन्दर बाल्यकाल!(साभार:कान्तिपुर अनलाईन)थाहा छैन अझै कतिञ्जेल टिक्ने हो यो बलिप्रथा????
जापानी महिलाको यो फिटनेस-क्रेजमा परेर अचेल बजारबाट केरा गायब भएको छ। केरा मनपर्ने खानेकुरामै पर्छ हाम्रो। छोरीले पनि खुब मन पराउँछे।
एक-दुई दिनसम्म नदेख्दा त केहि लागेको थिएन, तर हप्तादिनभन्दा बढी नदेखेपछि भने अलि चासो लाग्न थाल्यो भएको के रहेछ भनेर। केराको लोकप्रियता बढेको त धेरै महिनै भईसकेको रहेछ तर अचाक्लीसंग बढेको भने सेप्टेम्बर १९ को एउटा टिभी कार्यक्रमले गर्दा रहेछ। उक्त कार्यक्रममा एउटी मोटी महिलाले डेढ महिनासम्म ब्रेकफाष्टमा केरा र पानीमात्रै खाएपछि उनको तौल ७ किलो घटेको देखाईएको रहेछ। र के भनिएको रहेछ भने बिहानको खाजाको रुपमा केरा र पानीमात्र खाने हो भने बोसो लाग्दैन, मोटाईँदैन। बस् के चाहियो अब? कहिल्यै केरा खान मन नपराउनेहरुले पनि खानथाले, केरा हारालुछ हुनथाल्यो। सुपरमार्केटका केरा गृहिणीहरुले बिहानै सफाचट गर्दिन थाले। साँझतिरमात्रै किनमेल गर्न भ्याउनेले अब दुई-चार महिना केराको मुख देख्न पाउलान् जस्तो छैन। औसतभन्दा ७०% सम्म बढी बिक्री हुन थालेको छ रे केरा अहिले जापानमा। फिलिपिन्सजस्ता केरा बढी उत्पादन हुने ठाउँबाट मध्यपूर्बतिर जाने केरा समेत अहिले जापानतिर ल्याईँदै छ रे। र स्वाभाविक रुपमा केराको भाऊ पनि बढेको छ। केरा-साहूहरु मालामाल भ'का छन् होला:)
किताबहरु लेखिनुभन्दा पहिले mixi भनिने एउटा जापानी सामाजिक सञ्जाल (Social Networking Site) मा यसबारेमा थुप्रै चर्चा-परिचर्चाहरु भईसकेको रहेछ। mixiमा 'केरा-ग्रुप'हरु धेरै छन् रे अहिलेपनि। के बिहान-बिहान केरा र पानीमात्रै खाएपछि दिनभरि अरु जे-जे घिचेपनि बोसो लाग्दै-लाग्दैन त? केरा मा त्यस्ता के गुणहरु होलान्? साँच्चै यस्तो हो कि क्षणिक लहरमात्रै हो यो? यसबारेमा पढ्न मन छ भने तलका केहि सूत्रहरुका भित्र पस्नुस् र पत्यार लाग्यो भने तपाईँपनि बिहान-बिहान केरा र पानीमात्रै खान थाल्नुस्। केरा उसैपनि राम्रै कुरा हो, कुनै बेफाइदा गर्दैन बोसो घटेपनि-नघटेपनि।
Banana shortage stymies Japanese dietersDisappearing Banana---A new diet born on the Internet in Japan
तर 'नात्तो'को यो बजारु-हल्ला 'नात्तो' बनाउने केहि उद्योगहरुले बनावटी तथ्यांकका आधारमा चलाएको हल्ला रहेछ, 'नात्तो' बिकाउनको लागि। यथार्थ खुल्न समय लागेन। अचेल ती उद्योगका 'नात्तो'कसैले पनि किन्दैन होला। केराको कुरो पनि त्यस्तै हो कि?**************************यो तलको फोटो, हामी जाने गरेको सुपरमार्केटमा सधैं केरा राखिने ठाऊँको हो। यसरी यो ठाऊँ रित्तै भएको धेरै दिन भईसक्यो।
अनि अर्को सूचना छ; "'जानकारी'-टिभी कार्यक्रमको प्रभावले केरा चाँडै सकियो।" कति दिन यो 'क्रेज' चल्ने हो थाहा छैन।
साँच्चिकै केरै किन्न भनेर लाईन लागिएला जस्तो लागेको थिएन बिहान नौ बजेसम्म। छोरीसंग "घुमाउन लैजाने र बाहिरै खुवाउने" भनेर गरेको वाचा पूरा गर्नु थियो। नौ बजेतिर बाहिर निक्लिँदा पानी पर्न थाल्यो। घुम्न अलिक टाढै जाने योजना सेलायो अब। तर घरबाट बाहिर निस्किसकेपछि, सुपरमार्केटभित्रकै बच्चाहरु खेल्ने ठाऊँ र यताउति गरेर साढे दुई घण्टाजति छोरीलाई अल्मलाएर, त्यतै कतै खाना खाएर फर्किनुपर्ला भन्ने विचारले हिँडे छोरी लिएर। छोरीको सारमा हिँड्दा १० मिनेटको बाटो आधा घण्टा लाग्यो। साढे नौ मा सुपर मार्केट खुल्नु अगाडिको लाईन खासै ठूलो भने थिएन। म पनि लाईनको पूच्छर हुँदै छिरें र केरा राख्नेतिरै लागें। साँच्चैनै केराको वरिपरि टन्न मान्छेहरु झुम्मिरहेका थिए, बाहिर लाईन लागेकाहरुको ठूलो भाग यतै थियो। सामान्य अबश्थामा कदापि यस्तो हुँदैन थियो। दुईटा फोटा छन् तल, त्यतिखेर खिचेको। हात तन्काएर साना दुई झुप्पा केरा तान्न भ्याईयो आफूले पनि:)